Maraoka: Resabe tamin’ny karaman’ny mpanazatra vaovaon’ny ekipam-pirenena baolina kitra (2010) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Avrily 2021 5:10 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Nederlands, বাংলা, English
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Jolay 2010)
Ny baolina kitra no fanatanjahantena malaza indrindra any Maraoka. Hany ka vonona ny hamoaka vola be hanakaramana mpanazatra vaovao ho an'ny ekipany, antsoina hoe Les lions de l'Atlas ny Fikambanan'ny baolina kitra Maraokana. Nanomboka nitady fomba hanarenana ny vokatra ratsy sy hanatsarana ny fahombiazan'ny ekipa nasionaly ny fikambanam-pirenena nandritra ny fiadiana ny Amboara Eran-tany. Natomboka ny fifampiraharahana niaraka tamin'ilay teratany Belza Eric Gerets, izay notendrena ho mpanazatra ofisialin'ny ekipa Maraokana. Saingy nolavin'ireo mpitarika ny hanambara ny fe-potoana nifanarahana sy ny vola nekeny homena ilay mpanazatra vaovao raha ny marimarina kokoa. Nanontanian'ny parlemanta Maraokana momba ny karaman'ilay mpanazatra vaovao ny minisitry ny fanatanjahantena maraokana ary nandà ireo tarehimarika navoakan'ny fampitam-baovao [amin'ny teny arabo]. Araka ny tsaho nandeha dia karama azo lazaina ho betsaka indrindra ka hahatonga an'i Gerets ho ilay mpanazatra nasionaly be karama indrindra eran'izao tontolo izao aorian'ny Fabio Capello any Grande Bretagne. Nanaitra ny bilaogera sasany naneho hevitra momba ny vaovao izany. Na dia manan-danja any Maraoka aza ity fanatanjahantena ity dia maro no mihevitra fa azo nampiasaina tamim-pahendrena kokoa ilay vola.
Ekipa mpilalao baolina kitra any Maraoka nalain'i Wonker tao amin'ny Flickr
Tezitra i Abdelhamid ao amin'ny bilaogy Qalam Tha'ir noho ny habetsahan'ny karama izay tokony horaisin'ilay mpanazatra vaovao. Manoratra izy:
Rehefa nivoaka ny vaovao momba ny fifampiraharahana tamin'ny mpanazatra Belza dia nanomboka nanohitra ny fomba fiasa ny fampitam-baovao sy ny olona. Tsy ny fahaizan'ilay mpanazatra vaovao no nampirehitra ny afo, izay tsara laza […] fa ny habetsaky ny vola horaisiny avy amin'ny federasionan'ny baolina kitra Maraokana , izay mahatratra 3 miliara sentima isan-taona (2,6 tapitrisa euro isan-taona ).Marina fa liana amin'ny baolina kitra ny Maraokana ka izany no mampihevitra antsika fa tsy voavidim-bola izy io ary manan-danja kokoa noho ny zavatra rehetra, nefa miaraka amin'izay koa, dia firenena tany mahantra isika izay ahitana ny ankamaroan'ny mponina miaina anaty fahantrana lalina ary mijaly noho ny tsy fananan'asa, ny fijaliana sy ny tsy fahalalana hatry ny ela. Ny mahatsikaiky dia ambony noho ny karaman'ny mpanazatra baolina kitra rehetra manerantany, ankoatra ny an'i Capello any Angletera, ny an'i Gerets. Teti-bola kely kokoa no omena ho karaman'ny mpanazatra nasionaly na io any Italia, Alemana, Espana, Arzantina ary Brezila, na dia manana omena mihoatra izany aza izy ireo. Saingy ny mahasamihafa azy, manana federasionan'ny baolina kitra tantanana amin'ny fomba matihanina ireto firenena ireto, sy manaja ny fitsipika faran'izay tsotra sy mifanandrify amin'ny baolina kitra, ary indrindra indrindra, manaja ny fahiratan-tsain'ireo olom-pireneny.
Manontany tena i Anas ao amin'ny bilaogy Big Brother Maroc momba ny tsiambaratelo manodidina ny karaman'ny mpanazatra vaovao. Manoratra izy:
Inona no ifandraisan'ny karaman'i Eric Gerets amin'ireo fiaramanidina vaovaon'ny tafika Maraokana ? Ny tsiambaratelo fiarovana ? Tsia! Fantatray ny tetibolan'ny fiaramanidina, fa tsy ny an'i Gerets! […]
Fa nahoana ary ny olona rehetra no tsy miresaka momba io karama io ? Inona no tsy mety amin'ny filazana amintsika ny marina, miaraka amin'ireo tarehimarika, hoe ireto ny vola omena an'i Gerets ?
Mihevitra i Citoyen Hmida fa tokony handinika ny tena zava-misy ny manampahefanan'ny baolina kitra Maraokana.
Amin'ity vidiny ity, ny karama homena ilay mpanazatra vaovaon'ny “Lions” Atlas dia: avo dimy heny noho ny an'i Raymond Domemech, mpanazatra ny ekipan'i Frantsa.
Mihoatra ny an'i Marcello Lipi, mpanazatra ny Squadra Azzura.
Mihoatra noho ireo mpanazatra nasionaly miisa 29 amin'ireo 32 nanatrika ny fiadiana ny amboara eran-tany 2010.
Ka raha ny fahitana azy, ho “sambatra” tokoa ilay nofidian'ny FRMF !
Marary ao an-toerana ny baolina kitra nasionaly ary mijaly amin'ny fitantanana tsy mahomby any amin'ny ambaratongan'ny klioba sy ny federasiona! Lasibatry ny vola sy ny fanodikodinana ! Very fenitra sy fanahy! Tsy ny fahatongavan'ilay “mesia” vahiny vaovao no hamonjy azy..